Welcome to Aayaha Nolosha » MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 3:AAD).
MICNAHA IYO QIIMAHA BISHA RAMADAAN (QEYBTA 3:AAD).
May 8, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Ilmaha aan wali qaan gaarina Soonku waajib kuma aha, balse waxaa la rabaa markay 10-sano gaaraan inla yiraahdo sooma, si ay usii bartaan, waalidkoodna u helaan Ajar.
Qofka aan Caqligiisu taam ahayna soonku waajib kuma aha oo Rabbi (SWT) wuu ka qaaday mas´uuliyadii qofka waalan. Haweenta qabta caadaduna way a furaysaa, maalmahaa iyaga ahna way qadayn doon-taa bisha Soon kadib. Fadliga bisha Ramadaan waa mid ka balaaran in la koobo, Rabbbi (SWT) baana noo sheegay inay bishaas maalmeheeda kamid tahay habeen ka khayr badan kun bilood, oo noqonaysa 83 sano iyo dhawr bilood.
Habeenkaa isaga ahna Rabbi (scw) bisha ayuu ku dhex qariyay, oo sicad laynoo guma sheegin, maxaa yeelay Rabbi (swt) wuxuu inala rabaa inaan bisha maalmeheeda oo dhan cibaaday-sano, isagana usii dhawaano. Rasuulkeena (scw) ayaa noo faahfaahiyay fadliga iyo qaybaha bisha, wuxuuna yiri (10 maalmood ee hore waa Raxmad, 10 dhexana waa danbi dhaaf, 10 danabana naartaa laga xoroobaa).
Taasina waa tartiib layaab leh, oo inooga baahan inaan u fiirsan… Raxmad, Danbi dhaaf iyo naar kaxoroobid. Culima qaar macneeyay xuruufta kalmada Ramadaan oo yiri: R: Raxmad M: Maghfirah-Danbi dhaaf ض Ballan qaad Janno : أ Amaanun mina annaar – Naar ka xoroobid N: Nuurun mina Allah- iftiin xag Alle ka yimid.
Hadaan isku dayo inaan arintaa ku soo dhaweeyo tusaale yar waxaan…..La soco qeybta xigta.